Tommy Dreamer oo albaabada ka xertay dalab ay usoo gudbisay shirkadda Musaaracada WWE. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Maxaa Cusub » Tommy Dreamer oo albaabada ka xertay dalab ay usoo gudbisay shirkadda Musaaracada WWE.
Tommy Dreamer oo albaabada ka xertay dalab ay usoo gudbisay shirkadda Musaaracada WWE.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-08-16 7:18 PM Halyeyga ECW Tommy Dreamer oo kamid ah halyeeyada la hadal hayey in dhawaanahan ay kusoo laaban doonaa Musaaracada, kadib markii uu halyeygan dhowr jeer oo horey uu kasoo muuqday Bandhigyada laga soo daayo Tv yada dalkan Mareykanka.
Martiyegeliyaasha Dave Lagreca iyo Doug Mortman ayaa lasoo sheegayey iney wadahadal ku aadan kusoo laabashada Musaaracada kula jireen Tommy balse arinkaas gaashaanka ayaa loo daruuray.
Dreamer ayaa ka dhawaajiyey iney wax waliba u waqtiyeysan yihiin, waxa uuna sidoo kale xusay inuu qandaraas ka helay Shirkadda WWE.
Jaceylka uu qabo WWE iyo sida ba’an ee loola xiriirinayo inuu qandaraaska cusub qalinka ugu duugayo shirkadan, ayey hadana warar kale kaso baxeen reerkiisa waxa uuna hoosta ka xariiqay Tommy iney wax ka jiraan wararka kasoo baxay qoyskiisa.
“Caadiyan waa inaan dhahaa ‘Mahadsanidiin. hadii aad dooneyseen inaan idin imaado wan sameyn doonaa wax waliba oo awoodeyda ah taas oo aan idinkugu imaanayo, balse hadii ay arinku sidaas aheyn waa fikir kale iyaduna, waxa aan rajeynayaa inaan weli nahay dad asxaab ah, waana sii ahaan doonaa dad asxaab ah” Tommy Dreamer ayaa boggiisa Twitter ka kusoo qoray.
Dreamer ayaa aminsan inuu weli leeyahay tayo iyo awood uu dib ugu soo noqon karo WWE mustaqbalka, waxa uuna halyeygan u muuqdaa mid albaabada u furi doona shirkaddan mustaqbalka wallow uu si maldahan u diiday inuu hadda kusoo laabto.